Ahoana ny fomba mety hahatonga ny fiaramanidina ho vato fehizoron'ny faniriana eran'i Angletera eran-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ahoana ny fomba mety hahatonga ny fiaramanidina ho vato fehizoron'ny faniriana eran'i Angletera eran-tany
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Seranam-piaramanidina Heathrow, tobim-pitaterana entana, CargoLogicAir Boeing 747-83Q (F) ao anatin'ny fihazonana entana, Jolay 2017.
Ny fikarohana vaovao dia manasongadina ny fomba mety iharan'ny tsangan'asan'i UK pivot post-Brexit, miaraka amin'ny varotra tsy EU izay mety hitombo 20% ao anatin'ny dimy taona ho avy maiana ny £ 473 miliara tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 570 miliara tamin'ny 2025.
Ny tatitra CEBR vaovao dia manasongadina ny fomba mety hahatonga ny fiaramanidina ho vato fehizoron'ny faniriana eran'i UK Angletera, manampy ny indostria hanome bonanza varotra £ 204bn izay mety hahasoa ny zoro rehetra any UK.
Heathrow, izay efa manamora ny antsasaky ny varotra UK amin'ny lanja miaraka amin'ireo firenena CPTPP, no tsara toerana hanampiana ny orinasan'ny UK hivarotra sy hampitombo ny varotra miaraka amin'ny toekarena avo lenta aorian'ny Brexit.
Ny varotra any amin'ny firenena tsy EU amin'ny alàlan'ny Heathrow dia mety hitombo 11% amin'ny 2025 miaraka amin'ireo faritra miompana amin'ny famokarana lafo vidy, anisan'izany ny Avaratra Atsinanana sy ny Midlands, izay tombony ho azo araraotina indrindra rehefa mamorona fifandraisana ara-barotra vaovao i UK.
Araka ny Ivotoerana momba ny fikarohana ara-toekarena sy fandraharahana, ny fiaramanidina dia tokony ho ivon'ny pivot ity. Ny valim-pikarohana dia manondro fa ny sandan'ny varotra amin'ny alàlan'ny Heathrow amin'ireo firenena tsy UE dia mety hitombo 11% hatramin'ny 2025, raha ny varotra amin'ny firenena EU kosa dia 7% no mihena mandritra io fe-potoana io. Ny faritra manerana an'i Angletera dia hahazo tombony amin'ireo rohy fifanakalozana vaovao ireo, miaraka amin'ny heathrow manana andraikitra lehibe amin'ny fanokafana tsena vaovao sarobidy avy any Azia Pasifika sy Aostralia mankany Etazonia.
Ny sidina fiaramanidina dia manakiana ny drafitry ny governemanta ho an'ny Global Britain post-Brexit. Heathrow irery no manana ny fahafaha-manamora ny £ 204 miliara bonanza varotra ho an'ny orinasan'ny anglisy amin'ny lafiny rehetra amin'ny firenena, mamorona fotoana ho an'ny sehatry ny seranam-piaramanidina manontolo ary manamafy ny tamba-jotra UK.
Na izany aza, tsy ho tanteraka io fampiroboroboana ny varotra io raha tsy ny orinasan'ny fiaramanidina any UK dia tohanan'ny politikan'ny governemanta ary avela hiverina. Ny tarehimarika indostrialy ho an'ny Mey dia mampiseho fa ny sasany amin'ireo mpifaninana Eoropeana izay nahazo tombony tamin'ny fanohanana manokana an'ny sehatra nandritra ny areti-mandringana, toa an'i Netherlands sy Alemana, dia mahita ny fitomboana haingana indrindra. Ny taonina kargo amin'ny seranam-piaramanidina hub an'ny UK dia mbola midina 19% amin'ny ambaratonga 2019, raha oharina amin'ny Schiphol sy Frankfurt izay nihoatra ny haavon'ny 2019, nitombo 14% sy 9% tsirairay avy tao anatin'ny fe-potoana mitovy.
Ity fikarohana ity dia tonga rehefa niara-niasa tamin'ny Heathrow niaraka tamin'ny British Airways sy Virgin Atlantic i Heathrow mba hanandramana ny governemanta sy ny indostria hahatakatra ny fomba hanamorana ny fameperana ho an'ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka, hetsika iray izay fanalahidy hanombohana ny dia sy ny varotra. Amin'ny alàlan'ny tombony amin'ny dividendan'ny vaksinin'ny firenena, ny minisitra dia afaka manampy amin'ny fampitana an'io fanentanana ara-toekarena ho an'ireo mpanondrana manerana an'i Grande-Bretagne io, mba hiantohana ny fihazonan'i Angletera ny lafiny fifaninanana rehefa mivoaka ny firenena.
Ny tatitra Global Britain dia nanambara fa:
Tamin'ny 2025, ny sandan'ny varotra amin'ny alàlan'ny Heathrow dia mety hitombo mihoatra ny £ 204bn (hatramin'ny £ 188bn tamin'ny taona 2019), izay misolo tena ny 21.2% amin'ny varotra totalin'ny entana any UK ary 14.6% amin'ny varotra ataontsika amin'ny entana sy serivisy.
Ny fitomboan'ny varotra dia afaka manatsara ny faritra rehetra any Angletera. Ireo faritra manana fironana avo lenta amin'ny famokarana - anisan'izany ny Midlands sy Avaratra Atsinanana - dia toa mahazo tombony betsaka amin'ny fifanarahana ara-barotra amin'ny ho avy miaraka amin'ny toekarena mitombo haingana eran'izao tontolo izao. Ekosy sy Wales dia mety hahazo tombony amin'ny fampitomboana ny varotra amin'ny fambolena, ala ary jono koa.
Heathrow dia afaka nanampy tamin'ny fampandehanana ny fifanarahana momba ny varotra maimaimpoana ho avy - miaraka amin'ny 46% ny varotra araka ny sandany amin'ireo firenena CPTPP nohajaina tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina - raha ny seranam-piaramanidina kosa dia napetraka mba hanana andraikitra lehibe amin'ny fifampiraharahana amin'i Etazonia sy i Aostralia.
Heathrow dia mpanamora lehibe amin'ny varotra UK izay mitaky ny roa ampahatelon'ny varotra rehetra ampitaina amin'ny rivotra any Angletera (amin'ny sanda), ary io isa io dia nitombo hatramin'ny 75% ho an'ny varotra tsy EU.
Raha 90% -n'ny varotra UK amin'ny alàlan'ny volabe no entina amin'ny ranomasina, ny entana avo lenta kosa dia entina amin'ny rivotra. Heathrow no seranan-tsambo lehibe indrindra any Angletera, mitaky ny 21.2% amin'ny varotra entana any UK amin'ny sanda amin'ny 2019.
Ny fikarohana vaovao dia manamafy ny maha-zava-dehibe ny maodelin'ny seranam-piaramanidina hub manerantany ho an'ny UK post-Brexit sy ireo mpanondrana manankarena anglisy izay miankina amin'ny làlan'ny varotra fiaramanidina. Ny maodelin'ny hub dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny varotra, amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fangatahana fifandraisana eran'izao tontolo izao ary fanomezana safidy maro ho an'ny mpandeha, orinasa ary mpandraharaha, mpanondrana ary mpanafatra entana.
Ny CEO CEO Heathrow John Holland-Kaye dia nilaza: "Heathrow dia tsara toerana hanefana ny hetahetan'ny governemanta eran-tany britanika ary hanome fisondrotana, famporisihana ara-toekarena aorian'ny Brexit izay mitentina amina miliara maro. Satria ny seranam-piaramanidina tokana misy an'i UK sy seranan-tsambo lehibe indrindra, izahay dia vonona handray anjara toerana lehibe amin'ny famoronana fotoana ara-toekarena ho an'ny orinasa manerana ny firenena, manamora ny fifanarahana fivarotana malalaka ary miasa ho fifandraisana lehibe amin'ireo mpiara-miombon'antoka varotra lehibe. Ny minisitra dia tsy maintsy manararaotra miaro an'io fampisondrotana ara-toekarena lehibe io amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fiaramanidina britanika sy ny programa fanaovana vaksiny azy manokana amin'ny fanalefahana soa aman-tsara ny fameperana ny mpandeha vita vaksiny feno manomboka ny 19 jolay. ”
Ny Minisitry ny fanondranana Graham Stuart MP dia naneho hevitra hoe: “Rehefa manohy manao fifanarahana varotra malalaka amin'ireo firenena manerana an'izao tontolo izao isika, ny seranam-piaramanidintsika dia hanana andraikitra lehibe amin'ny hetahetan'ny UK eran'izao tontolo izao - hatramin'ny fidirana ho CPTPP ka hatramin'ny fifanarahana ara-barotra UK-Australia vita sonia.
"Ny fandaharan'asan'ny politikam-barotra dia hanampy amin'ny fampiakarana ny faritra rehetra amin'ny UK, hampihena ny vidiny ary hampihena ny kasety mena ho an'ny orinasa. Ny fanampiana avy amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina dia hanampy amin'ny fanamorana izany, hiantohana ny diany malemilemy kokoa amin'ny fanondranana UK any amin'ny tsena lehibe toa an'i New Zealand, Moyen Orient ary India. ”
Ny fikarohana dia noraisin'ny orinasa isam-paritra, miaraka amin'i Dai Hayward, CEO an'ny Micropore Technologies monina ao Teesside, nilaza hoe: "Micropore Technologies Ltd dia mpamatsy vahaolana teknolojia nahazo loka ho an'ny sehatry ny pharmaceutika sy biofarmaceutika. Noho ny toetoetran'ny orinasantsika manerantany dia ilaina ny ivon-seranam-piara-miasa mifamatotra tsara ho an'ny mpandeha sy ny fivezivezena. Heathrow dia manome izany indrindra, indrindra fa ny sidina isan'andro avy any amin'ny seranam-piaramanidintsika ao an-toerana, Teesside International, dia natohy vokatry ny ezaka nataon'ny Ben'ny tanànan'i Tees Valley, Ben Houchen. Manantena izahay fa afaka hanohy ny dia lavitra avy any Heathrow mankany amin'ny faritra manerana izao tontolo izao izay nandehanan'ny haitao nandritra ny areti-mandringana. ”
Mba hampisehoana ny asan'ny orinasa Britanika ambony sy ambany ny firenena izay manondrana ny entany sy ny serivisy amin'ny alàlan'ny Heathrow, ny seranam-piaramanidina koa dia hanangana fampielezan-kevitra eran-tany amin'ny Global Britain Business Champions amin'ny volana ho avy. Ireo orinasa ireo dia nitazona ny varotra tao anatin'ny taona lasa ary vonona handray anjara toerana lehibe amin'ny fitondrana an'i Britain eran-tany amin'ny taona ho avy.